Unugyada Load Warshad - Shiinaha Unugyada Load Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Daqiiqad Sare / Ka-Dhex-Dhex-Dheer Xarunta
Miisaanka Hopper & Net
Hubi Miisaanka & Mishiinada Buuxinta
Iskeelka Platform-ka iyo Miisaanka Wareejinta Suunka
Xalalka OEM iyo VAR
–Waxyaabaha aan la daadin karin, laser-ka ayaa xiran, IP68
Wuxuu u hoggaansamayaa xeerarka OIML R60 illaa 1000d
Gaar ahaan isticmaalka qashinka ururiya iyo darbiyada dhajinta taangiyada
Hal Dhibic Load Cell-SPG
C3 fasalka saxda ah
Ka baxsan xamuulka xarunta magdhow
Ugu badnaan awooda laga bilaabo 5 ilaa 75 kg
Xarigga gaashaaman ee gaashaaman
Shahaadada OIML waa la heli karaa marka la codsado
Shahaadada imtixaanka ayaa la heli karaa markii la codsado
Kali Dhibic Load Cell-SPF
Qalab sare oo hal dhibic oo xamuul ah oo loogu talagalay soo saarista miisaanka miisaanka. Qaybta weyn ee ku taal dhajinta ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa codsiyada culeyska markab iyo hopper iyo codsiyada bin-qaadista ee aagga miisaanka gawaarida miisaanka saaran. Laga soo dhisay aluminium iyo jawi ahaan lagu xiray shey dhoobada si loo xaqiijiyo cimri dherer.
Hal dhibic Load Cell-SPE
Unugyada culeyska masraxa waa unugyo culeysyo dogob leh oo hagitaan dhinac ah leh iyo isha foorarinaysa. Iyada oo loo marayo dhismaha laydhka alxanka leh ayaa si ku habboon loogu isticmaali karaa warshadaha kiimikada, warshadaha cuntada iyo warshadaha la midka ah.
Qalabka xamuulka waa laser-welded wuxuuna buuxiyaa shuruudaha heerka ilaalinta IP66.
Hal Dhibic Load Cell-SPD
Unugga xamuulka hal dhibic ayaa laga sameeyay maaddooyinka aluminium ee qaaska ah, dahaadhka anodized wuxuu ka dhigayaa mid u adkaysta xaaladaha deegaanka.
Kaligiis ayaa loo isticmaali karaa barnaamijyada miisaanka miisaanka leh waxayna leedahay waxqabad sare iyo awood sare.
Hal dhibic Load Cell-SPC
Waxay ku habboon tahay in loogu isticmaalo warshadaha kiimikada, warshadaha cuntada iyo warshadaha la midka ah.
Qalabka xamuulka wuxuu bixiyaa natiijooyin aad u sax ah oo la soo saari karo, muddo dheer xitaa jawiga warshadaha adag.
Qalabka xamuulka ayaa buuxiya shuruudaha heerka ilaalinta IP66.
Kali Dhibic Load Cell-SPB
SPB waxaa lagu heli karaa 5 kg (10) lb ilaa 100 kg (200 lb) nooc.
U adeegso qiyaasta miisaanka, tirinta miisaanka, hubi nidaamyada miisaanka, iyo wixii la mid ah.
Waxay ku samaysan yihiin aluminium.
Hal dhibic Load Cell-HBS
Xalka miisaanka loo yaqaan 'hopper' iyo 'bin' oo culeyskiisu sareeyo awoodiisa sare iyo cabirrada baaxadda leh ee ballaaran. Qorsheynta sii kordheysa ee qeybta xamuulka waxay u oggolaaneysaa boodhka tooska ah ee derbiga ama qaabdhismeedka toosan ee habboon.
Waa lagu rakibayaa dhinaca markabka, iyadoo maskaxda lagu hayo cabirka saxanka ugu badan. Awoodda ballaadhan ee ballaadhan waxay ka dhigeysaa unugga xamuulka loo adeegsan karo noocyo badan oo codsiyo warshadeed ah.
Unug Dijitaal Dijital ah: SBA-D
–Calaamadda wax soo saarka dhijitaalka ah (RS-485/4-silig)
- Culeysyo Magac leh (qiimeyn ah): 0.5t… 25t
–Laser la dhajiyay, IP68
-Uguur dhiska ilaalinta xad-dhaafka ah
Unug Dijitaal Dijital ah: DESB6-D
- Culeysyo Magac leh (qiimeyn ah): 10t… 40t
–Sawil si loo rakibo
Unug Dijitaal Dijital ah: CTD-D
- Culeysyo Magac leh (qiimeyn ah): 15t… 50t
–Isku soo celinta biraha dhagxaanta
- Qalabka birta ah ee biraha ah ee laysku xiro, IP68
Miisaannada Miisaanka ee Miisaanka Dijital ah, Miisaanno La Xaqiijiyay, Miisaanka Miisaanka Miisaanka, Shear Beam Load Cell, Miisaan Miisaanka Miisaaniyadda, Mass Calibration,